အာဏာပိုင်ဆိုတာဘာလဲ။ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 29, 2008 စနေနေ့, ဧပြီ 30, 2016 Douglas Karr
သင်အချို့ရှာဖွေမှုများကိုပြုလျှင် အ ဗိုလ်မှူး ဆိုဒ်များကြေငြာ တွစ်တာ အာဏာပိုင်များအငြင်းအခုန်, သင်သည်ငါ့မှတ်ချက်များအများစုမှတ်ချက်အပေါ်လုပ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ လူတိုင်းကငါ့ကိုအခွံမာတွေမောင်းနေတယ် စောင့်ရှောက် အဲဒီအကြောင်းပြောနေတာ - တစ်စုံတစ် ဦး ကပင်သွား။ တည်ဆောက် နှစ်ထပ်ကိန်း နှင့် နှစ်ဆ.
ပိုကောင်းတဲ့နာမည်တစ်ခုရှိလိမ့်မယ် နောက်လိုက်များအရ Tweets များကိုအော်ဒါတွင်ရှာပါ.
ငါသိတယ်၊ ဒါကရှည်လျားလှတဲ့နာမည်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအတိအကျပဲ။ အဲဒါ .... မဟုတ်ဘူး အာဏာ.
တစ်စုံတစ် ဦး ကလက်ခံရရှိရန်အလို့ငှာ အာဏာ အင်တာနက်ဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းအတွက်အရာများစွာလိုအပ်သည်။
ဤ အင်ဂျင်ကို sorting တွစ်တာအတွက်နှစ် ဦး စလုံးကင်းမဲ့နေသည်။ ငါအကြောင်း Tweet လုပ်ခဲ့သည့်အခါ Valkyrie လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက် ၃,၂၀၀ နှင့်အတူရလဒ်ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်။ ခရစ် Pirillo ရဲ့ Valkyrie အပေါ် Tweet သူ၏ရလဒ် ၂၄၀၀၀ သည်ယနေ့နံပါတ် (၁) ဖြစ်သည်။
ငါခရစ် Pirillo ကိုငါချစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သူ့မှာအာဏာကိုမငြီးမငြူ (Chris စိတ်မကောင်းပါဘူး!) Valkyrie.
သူတို့မှာနောက်လိုက် ၁,၈၈၂ ယောက်ပဲရှိသေးတယ်၊ အဲဒါကိုဖော်ပြဖို့အများကြီးပိုတိတိကျကျဖြစ်နိုင်တယ် NY Times ရုပ်ရှင် Twitter, မှ NY Times ရုပ်ရှင်, ငါ့ကိုထက်အများကြီးပိုသောအခွင့်အာဏာရှိပါတယ်, ခရစ်သို့မဟုတ်အခြားမည်သူမဆို။ ထိုအခါ NY Times Twitter အကောင့်နောက်လိုက်အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ငါယုံကြည်တယ် Google ရဲ့ pagerank algorithm ကို အလွန်ကြီးစွာသောအစဖြစ်နိုင်သည်။ တွစ်တာလျှောက်လွှာ၊ တွစ်တာအကြိမ်ရေ၊ တွစ်တာအကြိမ်ရေနှင့်နောက်လိုက်အရေအတွက်ကိုစောင့်ကြည့်သော Twitter application တစ်ခု သူတို့၏ အခွင့်အာဏာနှင့်ဆက်ဆံရေး) ပေးထားသောနယ်ပယ်အပေါ်စိတ်ကူးယဉ်ပါလိမ့်မည်! အဲဒီမှာအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘလော့ဂ်ရေးတဲ့တွစ်တာတွေကိုရှာဖွေနိုင်တာကိုနှစ်သက်ပါတယ်။
Tags: အာဏာchris pirilloဂူဂဲလ် pagerankGoogle pagerank algorithm ကိုရုပ်ရှင်တွေNew York TimesNew York Times ရုပ်ရှင်အချိန်ကောင်းPageRankpagerank algorithm ကိုနှစ်ဆနှစ်လကျောက်တုံး
ဒီဇင်ဘာ 30, 2008 မှာ 10: 59 AM
Doug, ဒီပင်ပန်း, ကောင်းစွာဝတ်ဆင်, ရှေးကသြောအငြင်းအခုံအချို့စိတ်ဖောက်ပြန်ထည့်သွင်းမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးမှုတွင်ဘုံအဓိပ္ပာယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးရန်“ အခွင့်အာဏာ” နည်းသောသူများကိုကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်ယူကြသနည်း။
Great post ။ ကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက် ၂၈၀၀ ထံစာပို့တာပါ။ အခွင့်အာဏာရှိသူ A-listers (ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့တာကိုမယုံနိုင်) ပြပါလိမ့်မည်။ 🙂
ဒီဇင်ဘာ 30, 2008 မှာ 11: 19 AM
ဤသည်မှာအမှန်တကယ်စကားမပြောနိုင်သောအယူအဆကိုထောက်ပြသောအသံများ၏သံပြိုင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဤစနစ်ကိုထောက်ခံအားပေးသူများသည်နက္ခတ္တဗေဒနောက်လိုက်အရေအတွက် (Loic, Scoble, Arrington, etc) ရှိသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်ကိုအမှန်တကယ်ဘာကြောင့်မပြောသင့်သနည်း -“ ကျွန်ုပ်၏အလွန်အရေးကြီးသောသူငယ်ချင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်၏အာရုံကိုခံထိုက်သောသူများထံမှကျွန်ုပ်၏တွစ်တာများကိုပြပါ။ ”